Dib u eegida Caymiska Allstate 2021: Faa'iidooyinka & Khasaaraha | Sharci & Fadeexad | Sida ay u shaqeyso
Bogga ugu weyn Dib u eegida Caymiska Allstate 2021: Faa'iidooyinka & Khasaaraha | Sharci & Fadeexad | Sida ay u shaqeyso
Raadinta shirkad caymis oo ku siin karta caymiska heerka ugu fiican ee aad rabto? Wax dheeraad ah ha u eegin sababtoo ah caymiska Allstate wuxuu bixiyaa dhammaan caymiska caadiga ah ee aad uga baahan tahay caymis baabuur.
Hagahan, waxaan ku soo bandhigi doonaa tafaasiil cad oo ay tahay inaad ka ogaato Caymiska Allstate, faa'iidooyinka iyo khasaarihiisa, sababta aad u isticmaalayso, iyo sida ay u shaqeyso.
Doorashada Caymiska Allstate
Allstate Caymiska Gawaarida Doorashadaada
1. Hubinta Gunnada Wadista Badbaadada ah
2. Cafiska shilka
3. Abaalmarinada laga jari karo
4. Baabuur cusub oo beddela
Isbarbardhigga qiimaha caymiska baabuurta ee Allstate
Faa'iidooyinka caymiska Allstate
2. Barnaamijyada suuq-geynta iyo iibinta gaarka ah
Qasaarooyinka caymiska Allstate
Waa imisa Guddiga Caymiska Allstate?
Sida Loo Kordhiyo Guddiyada Caymiska Allstate
Caymiska Allstate ma sharci baa mise waa khiyaamo?
Sida Loo Ogaado Khayaanada Caymiska
Sida Looga Ilaaliyo Naftaada Khiyaanada Macaamilka
Ku saabsan Caymiska Allstate
Caymiska Allstate waxaa loo aasaasay shirkad caymis baabuur sannadkii 1931-kii, Caymiska Allstate wuxuu soo bandhigay nidaam qiimeeya badbaadada darawallada, sidoo kale wuxuu furay xafiiskii ugu horreeyay ee sheegashada, wuxuu aasaasay barnaamij deeq ah oo lagu dhisayo barayaasha si loo baro darawallada, wuxuuna sidoo kale bixiyay qiimo dhimista ugu horeysa ee mulkiilayaasha baabuurta yar yar.
Waxay bixiyaan qiimo dhimis badan oo xiiso leh laakiin marar badan, maaha mid ka mid ah ikhtiyaarka ugu horreeya ee darawaliinta intooda badan oo ku salaysan falanqaynta dhowr nooc oo darawal ah. Qiimaha caymiska Allstate wuxuu ku kici karaa kharash ka badan marka loo eego caymiska kale sida wakaaladaha, iyo macluumaadka la ururiyey ayaa sheegaya in maaraynta iyo ku qanacsanaanta macaamiishu ay noqdaan kuwo dhexdhexaad ah.
Habka ugu fiican ee caymiska Allstate waa shabakadeeda wakiileed ee ballaaran taasoo u sahlaysa dadka raba inay caymis ku iibsadaan wakiil inay si sahal ah u sameeyaan.
Sii socoshada, dib u eegistani waxay qiimaysaa caymiska Allstate awoodiisa, maaraynta sheegashooyinka, fursadaha caymiska, khibrada wax iibsiga, barnaamijyada leh faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka dhimis ka dibna waxay eegaysaa sida ay u barbar dhigto caymisyada kale.
ARAG SIDOO KALE: Dib u eegida Caymiska xididka 2021: Ma xalaal baa mise waa khiyaamo| Sida ay u shaqeyso
Caymiska Allstate wuxuu bixiyaa dhammaan ceymisyada caadiga ah ee aad uga baahan tahay caymis baabuur. Ma laha caan ka badan, codad, ama dib u eegis sida Farm State ama Geico, laakiin markaas caymiska Allstate wuxuu bixiyaa caymiska rideshare ururada gaadiidka online sida Uber iyo Wadayaasha Lyft.
Caymiska Allstate wuxuu ka soocaa tartamayaashiisa "Barnaamijka Auto Choice Auto" kaas oo ku dara dhawr caymis wadayaasha kuwaasna waa wax aan caadi ahayn caymisyada kale.
Caymiska Allstate wuxuu bixiyaa waxaa ka mid ah:
Darawal aan caymis lahayn
Allstate waxay bixisaa xulashooyinka caymiska baabuurta ee caadiga ah, oo lagu daray astaamo ikhtiyaari ah oo aad ku dari karto (waxay kuxirantahay gobolkaaga) kharash dheeri ah, oo ay ku jiraan:
Shilku waa dhacdo lama filaan ah ka dibna waxay ku dhici kartaa qof kasta, caymiska Allstate wuxuu leeyahay barnaamij ikhtiyaari ah oo la yiraahdo Your Choice Auto meel lagu aqoonsanayo laguna abaalmariyo wadista badbaadada leh. Caymiska Allstate wuxuu xisaabiyaa inuu ku kacayo inta u dhaxaysa 12 - 18% gees ka ah khidmadaha siyaasadda caadiga ah, laakiin markaa waxay noqon kartaa shabakad ah 7 - 13% korodhka marka la go'aaminayo gunnada wadista badbaadada. Caymiska Allstate Xidhmada Auto Choice Auto waxay u saamaxdaa macaamiisha u qalma inay wax ku kaydsadaan sifooyinka soo socda:
Jeegaga gunnada wadista badbaadada leh waxaad ka faa'iidaysan kartaa jeeg ilaa 5% ah 6-bilood ee kharashkaagii hore ee 6-dii biloodba shil baabuur wadista dalka oo dhan (marka laga reebo siyaasadaha New York, halkaas oo gunnada wadista badbaadada leh lagu bixiyo qaab qiimo dhimis).
Akhri ALSO: Dib -u -eegista Shirkadaha Caymiska Baabuurka ugu jaban 15
Caymiska Allstate wuxuu kuu ogolaanayaa korodhka lacagta caadiga ah iyo kharashka shilka markaad gasho shil. Baaxadda cafiska (weyn vs. shilalka fudud) way ku kala duwan yihiin taariikhda wadista caymiska iyo inta sano ee macmiilka Allstate. Iyada oo ku xidhan heerka qorshaha iyo diiwaanka shil la'aanta darawalka, tani waxay la macno noqon kartaa hal ilaa dhawr shil oo la cafiyay muddada saddexda sano ah iyada oo aan la kordhin qiimaha lagana saarin qiimo dhimista darawalka Wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, darawalada caymis ku leh California, qaabka Cafiska Shilka waa mid xadidan, oo waxaad weli waayi kartaa Dhimista Darawalnimada Wanaagsan.
Caymiska Allstate wuxuu hoos u dhigayaa $100 marka aad iska diiwaan geliso iyaga, ka dibna waxay qaadataa $100 dheeraad ah sanad kasta oo aadan ku lug yeelan shil, taasoo ah ilaa $500 oo la dhimay.
Waxaa laga yaabaa inaad iibsatay gaarigaaga cusub 2012 ama sanadkaas kadib, waxaana lagu soo koobay seddexdii sano ee ugu horeysay, Caymiska Allstate wuxuu markaas u diri doonaa siyaasad-hayaha ugu weyn jeeg muujinaya qiimaha gaariga kaasoo ka soo horjeeda qiimaha jaban kaas oo sidoo kale noqon kara si weyn hoos loogu dhigi doonaa.
Inta u dhaxaysa afarta caymis ee baabuurta waaweyn, caymiska Allstate waa kan ugu yar ee la awoodi karo ee profiles darawalka kaas oo aan dib u eegnay. 2,150 ka magaalo ee aanu dib u eegnay, waxa aanu ogaanay in caymiska Allstate uu inta badan ku dhaco inta u dhaxaysa 6aad iyo 10aad ee caymiska ugu jaban ee muunadayada darawalka 30 jirka ah. Caymiska Allstate wuxuu ahaan jiray shirkadda caymiska ugu jaban oo qaadata wax ka yar 3% 2,150 magaalo.
La shaqaynta caymiska Allstate waxay awood kuu siinaysaa inaad iibiso tiro buuxa oo alaabooyin caymis ah oo ka duwan kuwa kale. Waa kuwan dhowr faa'iidooyin kale oo Caymiska Allstate ah:
1. Waxay bixisaa rajo
Sideed uga heli kartaa rajooyinka caymiska Allstate? Caymiska Allstate wuxuu leeyahay macaamiil badan ka dibna waxay sheeganayaan inaan la taaban.
Mid ka mid ah siyaabaha aad sidoo kale ku heli karto rajooyinku waa iskaashi lala yeesho wakiilada caymiska Allstate. Iskaashiyadani waxay ka shakisan yihiin macluumaadka raadinta rajooyinka, maadaama aad u soo bandhigi karto xalal nololeed macaamiisha caymiska Allstate ee jira.
Intaa waxaa dheer, wakiilada aad la wadaagto wakiilka maaliyadeed ee shakhsi ahaaneed waxaa lagu wargeliyaa dalabaadka macaamiishooda, taas oo kordhinaysa fursadahaaga beddelka.
Akhri ALSO: Maxay Caymiska Baabuurku ugu qaalisan yihiin 2021?
Sidaan soo sheegnay, wakiillada maaliyadeed ee gaarka ah waxay iskaashi gaar ah la leeyihiin dhowr wakiil oo Allstate ah.
Iskaashigu wuxuu kuu keenayaa guddiyo, cusbooneysiin, iyo dariiqyo, halka wakiilladu ay helaan gunnada P&C iyo haynta macmiilka oo la wanaajiyey.
Qiimaynta qancinta macaamiishu waxay ka hoosaysaa celceliska waxa shirkadaha kale helaan. Adeegga macaamiisha ee Allstate Caymiska waa ka yar yahay waxa shirkadaha kale bixiyaan.
Ugu dambeyntii, waxaa jira wax yar ama wax xayeysiin ah oo laga sameeyay ganacsiga waana sababta ay dadku u leeyihiin inay hubiyaan shirkadaha kale ee caymiska ka hor inta aysan ugu dambeyntii ogaanin caymiska Allstate.
Caymiska Allstate ma liis gareeyay guddiyada, laakiin waxay ku hawlan tahay qorshaha sidii mid ka mid ah kuwa ugu tartanka badan warshadaha, maadaama aysan jirin meel dhamaadka dakhligaaga.
Si loo bixiyo fikrad hufan waxa aad filan karto in aad kor u qaaddo, celceliska dakhliga qaranka ee burburka maaliyadeed ee caymiska Allstate waa ilaa $56,000, laakiin mararka qaarkood waxa ay ka badnaan kartaa $100,000.
Qiyaasta kale ayaa celcelis ahaan ka dhigaysa ku dhawaad ​​$77,000 sanadkii, iyadoo qiimayaasha qaar ay ka badan yihiin $170,000.
Haddii aad rabto inaad ku kordhiso komishankaga Caymiska Allstate, waxaad u baahan tahay inaad kordhiso iibkaaga. Si loo gaaro yoolkan, Caymiska Allstate wuxuu siiya kuwa hore loo sheegay shuraakada wakiilada caymiska Allstate oo leh dammaanad suuq-geyn oo si wanaagsan loo habeyn karo.
Caymiska Allstate maaha khiyaamo midna nidaamka Ahraamta, ama caymiska MLM. Waxaad noqon kartaa mid aad u xoog badan oo kalsooni ku saabsan, dhammaan mahadnaqa dib u eegisteeda weyn iyo ka dib taariikhda dheer ee shirkadda ee ku dhawaad ​​​​85-sano, ka dibna waa nasiib iyo maqaam weyn oo la gaaray.
Caymiska Allstate wuxuu leeyahay qiimeeyn dhexdhexaad ah oo xooggan shaqaalaheedii hore taasoo ka caawisay inay sumcaddooda sii xoojiyaan. Iyadoo lala kaashanayo qiimeynta guud ee 3.8/5, shaqaalaheedii hore waxay ku qiimeeyeen caymiska Allstate 3.7/5 hadhaaga ku salaysan nolosha shaqada iyo 3.4 faa'iidooyinka iyo mushaharka.
Mid ka mid ah ujeedooyinka dib u eegistan ayaa ah in naloo soo bandhigo fahamka iyo ogaanshaha sida loo aqoonsado caymiska, tani waxay kaa caawin kartaa inaad iska ilaaliso inaad noqoto dhibane khiyaano. Khiyaanada caymisku waxay ku iman kartaa siyaabo badan oo lagu ogaanayo khiyaanada caadiga ah ee ka jaban kuwa kale waxaana ka mid ah:
Si ula kac ah loo burburiyo hantida, ka dibna lagu khiyaaneeyo shirkadda caymiska si ay u rumaystaan ​​inay tahay shil.
Isagoo iska dhigaya inuu dhaawacmay si loo helo magdhowga shaqaalaha ama naafanimada ama caymiska dhaawaca shaqsiyeed.
Soo bandhigista warbixin xatooyo been ah, ama iska yeelyeelka hantida waa la xaday markii dhab ahaan la burburiyay ama la qariyay.
Waxaan kuu keenaynaa tillaabooyin la xaqiijiyay iyo tillaabooyin aad qaadi karto si aad naftaada iyo kuwa aad jeceshahayba uga ilaaliso khiyaanada macaamiisha. Waa kuwan siyaabaha ugu fiican ee aad naftaada u ilaalin karto:
Ka fogow la wadaaga Lambarkaaga Bulshada (SSN), akoonkaaga bangiga ama macluumaadka kaadhka deynta shisheeyaha.
Hubi inaadan saxeexin waraaqaha ilaa aad si fiican u akhrido oo aad fahanto.
Ha bixin lacag ka hor si aad deyn u hesho ama aad ugu guuleysato bakhtiyaanasiib.
Ha ka jawaabin iimaylo ama warqado kaa codsanaya inaad lacag dalkaaga ka baxdo.
Caymiska Allstate ma liisto guddiyadiisa, laakiin waxay ku hawlan tahay qorshaha sida kuwa ugu tartanka badan warshadaha, Caymiska Allstate wuxuu si dhexdhexaad ah u qiimeeyay shaqaalaheedii hore kaas oo gacan ka gaystay inay sumcaddooda sii xoojiyaan. Marka lagu daro qiimeynta guud ee 3.8/5, shaqaalaheedii hore waxay ku qiimeeyeen caymiska Allstate 3.7/5 hadhaaga ku salaysan nolosha shaqada iyo 3.4/5 faa'iidooyinka iyo mushaharka.
Sannadkee Ayaa La Dhisay Caymiska Dhammaan Gobolka?
Caymiska Allstate waxaa la aasaasay shirkad caymis baabuur sannadkii 1931kii.
Caymiska Allstate ma yahay mid xalaal ah?
Caymiska Allstate maaha khiyaamo midna nidaamka haramka ama caymiska MLM. Waxaad noqon kartaa mid aad u xoog badan oo kalsooni leh oo ku saabsan, dhammaan Thanks to dib u eegistiisa weyn ka dibna taariikhda dheer ee shirkadda ee ku dhawaad ​​85-sano, ka dibna ay nasiib iyo heerka weyn ee la gaaray.
Waa maxay Alaabta lagu Iibiyo Caymiska Gobolka oo dhan?
Alaabta lagu iibiyo Caymiska Allstate waxaa ka mid ah: • Caymiska ATV
• Caymiska baabuurta
• Caymiska xayawaanka
• Caymiska mootada
• Caymiska nolosha
Allstate ma qorshe ahraameed?
Allstate maaha qorshe Ahraamta, mana aha khiyaamo, ama caymis MLM.
Waa maxay qiimaynta caymiska Allstate?
Sida laga soo xigtay Xafiiska Better Business, Caymiska Allstate waxaa la siiyaa qiimeyn A+, inkastoo lagu yaqaan tiro badan oo cabashooyin ah.
Ma jiraan wax daaweyn ah, kaliya khiyaano: 7 khiyaamo waxaad ka heli doontaa sanduuqaaga boostada
Dib u eegida Caymiska Baabuurka ee Allstate 2021
Dib u eegista caymiska Allstate
Dib u eegida Caymiska xididka 2021: Ma xalaal baa mise waa khiyaamo| Sida ay u shaqeyso
Dib u eegida Caymiska Hippo 2021: Ma xalaal baa mise waa khiyaamo| Sida ay u shaqeyso
Dib -u -eegista Caymiska Caafimaadka ee Cigna 2021: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Sharci Ama Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
Waa maxay Maaliyadda Shakhsiyeed? | Hagaha Khabiirka
10 -ka Dhakhtar Ee Ugu Mushaharka Badan Caalamka | 2021
Philo vs Sling TV: Adeeggeeda Socodkee baa ka jaban & ka fiican?
Waxaa jira adeegyo badan oo qulqulka ah kuwaas oo ku siinaya fursad aad ku qulquli karto noocyo kala duwan oo…
Faallooyinka Caafimaadka IQ ee 2021: Sharci ama Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Hab-nololeedka caafimaadku waxa uu wanaajiyaa hankaaga, sawirkaaga, iyo fayoobida guud. Si loogu celiyo muhiimada ay leedahay in si caafimaad leh loogu noolaado -…